Dib u dhaca ku yimid shirkii madaxda DF iyo maamul goboleedyada – KHAATUMO NEWS
Dib u dhaca ku yimid shirkii madaxda DF iyo maamul goboleedyada
Wafdi hordhac ah oo ka socda dowladda Soomaaliya aya gaaray magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland, halkaasi oo dhawan uu ka furmo doono shir u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada.
Wararka aan ka heleyno magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland ayaa sheegaya inuu maanta dib u dhac uu ku yimid shir la filayay inuu ka furmo magaaladaasi, kaasi oo u dhaxeeyay madaxda dowladda iyo maamul goboleedyada.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in shirkaasi uu furmi doono maalinta Sabtida ah, sida xogaha aan heleyno, iyadoo wafdiga dowladda ee gaaray Garowe ay kulamo hordhac ah la qaateen madaxda Puntland.
Shalay Magalada Garoowe waxaa tegay wufuud horudhac ah oo ka kala socda Xafiisyada Madaxweynaha iyo kan Ra’iisul Wasaaraha, waxaana sidoo kale socda wadatashiyo ay sameynayaan Madaxda dalka oo ku aadan qorshaha ay shirkaasi la tegayaan.
Madaxda maamul goboleedyada ayaanan dhankooda tagin magaalada Garowe, waxaana la filayaa inay qaarkood tagaan maalinta beri ah, sida wararka aan heleyno ay sheegayaan.
Shirkaasi ayaa qorshaha waxa uu yahay in lagu xaliyo tabashada ay qabaan madaxda dowlad goboleedyada.
Previous Post: Deg Deg Daawo :Beesha Habar Jeclo Ka Hadashay Sarakiisha Samaroon ay Dilen.
Next Post: Daawo:Cali Khaliif Oo Amaanay Siilaanyihii Xasuuqay Shacabka SSC,